#1 သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူဆုံးဖြတ်တာလဲ? | Mycanvas
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအာရုံစိုက်နေတာထက် အနာဂတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေရန်လိုပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီမျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် မဟာဗျူဟာ (၃) ခုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမယ်။ ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ : မိမိရဲ့ “အတိတ်”၊ “ပစ္စုပ္ပန်” နဲ့ “အနာဂတ်” ကိုခွဲခြားခြင်း
လူတို့သည် သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ‘ပစ္စုပ္ပန်’ ကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးထားသော ‘လက်ရှိ’ မိမိရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်တွင်မူတည်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လူတို့ဟာ မိမိတို့ကိုယ်ကိုခေါင်းစဉ်များတပ်ပြီး ကန့်သတ်ထားသောအသုံးအနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် “ကျွန်ုပ်ဟာ Introvert တစ်ဦးဖြစ်တယ်”၊ “ကျွန်ုပ်ဟာ လူအပေါင်းအသင်းမဆံ့ဘူး” စသဖြင့်သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်များတပ်ပြီးတံဆိပ်ကပ်ထားလျှင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တိုးတက်ရန်နေရာမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေတပ်ပြီးတံဆိပ်ကပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တခြားပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော်လည်း လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့အခြေအနေနဲ့ အတိတ်ကအခြေအနေကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အတိတ်က ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုအခုမလိုချင်တော့ပါဘူး။ အတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုနားလည်ရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် သင်ဟာသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို သင်၏ရည်မှန်းချက်သေးငယ်သောအတွက် ၃ လကြာအောင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးပြီးပါကမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ၃ လကြာပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်လာတဲ့သင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃လကသင်နဲ့ အကောင်းဘက်ကနေကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝေါဟာရအသစ်၃မျိုးကို သင်မှတ်သားထားမယ်ဆိုပါက ၃ လအကြာတွင်စကားလုံးအသစ် ၂၇၀ ကိုသင်သိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာ လက်ရှိသင့်အခြေအနေနဲ့ကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သင်ဒီနေ့ကစပြီး နောက်၃လအကြာမှာ ဘယ်လိုတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါသလဲ? သင့်အစီအစဉ်တွေကို တခြားအသုံးပြုသူတွေနဲ့အတူ Comment session မှာမျှဝေတွေးနွေးလို့ရပါတယ်။